Tababbarka Caafimaadka - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Adeegyada Caafimaadka > Tababbarka Caafimaadka
Caawinta xubnaha qaba xaaladaha daba dheeraada waxay hagaajinayaan tayada noloshooda.
Nolosha caafimaadka leh ayaa ah aaladda ugu wanaagsan ee lagu maareeyo xaaladaha daba dheeraada. La noolaanshaha xaalad daba dheeraatay way adkaan kartaa tababarayaasheena caafimaad ayaa halkan u jooga inay kaa caawiyaan inaad maamusho maalinba maalinta ka dambeysa. Adiga oo isbeddelo yar ku sameeya qaab nololeedkaaga, waxaad isbeddel wanaagsan ku sameyn kartaa caafimaadkaaga iyo sida aad dareemeyso. Waxaan u heellan nahay inaan taageerno adiga iyo yoolalkaaga caafimaad.
Tababarayaashayada Caafimaadka waa xirfadlayaal caafimaad oo ay kujiraan dhaqaatiirta diiwaangashan, tababarayaal caafimaad oo la aqoonsan yahay, iyo / ama aqoonyahanno macaan oo la aqoonsan yahay. Waxay ku siiyaan taageero wanaagsan iyo hagitaan iyagoo u maraya kal-fadhiyo hal-hal ah si ay kaaga caawiyaan inaad isbeddelo qaab nololeed caafimaad leh. Waxyaabaha aan kaa caawin karno waxaa ka mid ah:
Barashada sida wax loogu cuno hab caafimaad leh isbadalna loogu sameeyo cuntadaada si loo maareeyo xaaladaada caafimaad.
Kordhinta dhaqdhaqaaqa jirka ee maalinlaha ah iyadoo lagu saleynayo heerka jimicsigaaga iyo awoodahaaga
U maareynta culeyska qaab caafimaad
Hubinta inaad u qaadanaysid dawooyinkaaga habka saxda ah
Hagaajinta tayada hurdadaada
Kugu xidhayo ilaha bulshada ee khuseeya
Kaa siinaya qalab iyo taageero si aad uhesho miisaan caafimaad qaba
Isku-dubbaridka daryeelka kooxdaada caafimaadka si loo hubiyo inaad hesho dhammaan tijaabooyinka iyo adeegyada aad u baahan tahay
Haddii aad leedahay mid ama in ka badan shuruudaha soo socda, aan ku taageerno
Tababarahayaga caafimaadka ayaa bukaanada u aqoonsada xaaladahan soosocda isla markaana ka qayb qaata si ay u eegaan inay caawimo dheeraad ah u baahan yihiin Haddii aad ku xanuunsato mid ama in ka badan oo ka mid ah xaaladaha soo socda, aan ku taageerno:
Sonkorowga aan la xakamayn wuxuu sababi karaa arrimo caafimaad oo kala duwan. Baro sida cuntadu u saameyso cudurkaaga macaanka iyo meelaha caafimaadkaaga ah ee aad diirada saareyso. Waxbadan ka baro maareynta sonkorowga.
Xiiqdu waxay ku timaaddaa qaabab iyo darnaan badan. Ka fogaanshaha xasaasiyadda, astaamaha neefta waa la maareyn karaa si aad ugu soo noqoto noloshaada. Waxbadan ka baro maareynta calaamadaha cudurka neefta.
Cudurka Sambabka ee Cudurka Joogtada ah (ama COPD) wuxuu adkeyn karaa neefsashada. Waxaan ku taageernaa xubnaha innagoo tusayna farsamooyin si ay si fudud ugu neefsan karaan. Waxbadan ka baro maareynta COPD.
Wadna qabad la'aantu waa marka aanu wadnahaagu dhiig garaaci karin waana xaalad halis ah. Isbedello yar oo ku yimaada cuntadaada iyo qaab nololeedkaaga ayaa kaa caawin kara inaad iska ilaaliso xaalad caafimaad oo deg deg ah. Wax badan ka baro wadnaha oo istaaga.
La xiriir Tababaraha Caafimaadka
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan tababarka caafimaadka ama jadwal u sameynta tababaraha caafimaadka, naga soo wac 1-866-418-7008 ama email [emailka waa la ilaaliyay].
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Nofeembar 6, 2020